Umshini wokubopha ochwepheshe - iSearch
Qala Wena ithuluzi sokuprakthiza lochwepheshe
Iphelele sokuprakthiza for Wabasaqalayo futhi ethuthukile
a sokuprakthiza ine-attachment ukuze kuvumele izimbobo ziboshwe ngezinto ezihlukahlukene. I-drill iyasebenza nge-motor motor. I-drill ingahle ibe yinto ekuhambeni okusheshayo kokujikeleza. Lezi zinto zingaba yikhonkri, itshe, insimbi, ipulasitiki noma izinkuni.
Ngumuphi umshini wokwenza umshini wezinto?
Okunamathiselwe okufanele kunikezwa ngendaba ngayinye. Izigxobo zokugqoka zihambisana ngqo nobunzima obubonakalayo. Uma uzama ukubamba ngokunamathiselwe okungalungile kwento ethile, ngeke uphumelele. Esikhundleni salokho, kungenzeka ukuthi ulimaza umshini wokugqoka kanye nezinto. Umshini ophansi kakhulu wendaba ungaphinda uvele. Lokhu kwandisa ingozi yokulimala. Kunezinsimbi zokugaya ezindaweni eziningi ezihlukahlukene. Lokhu kukuvumela ukuthi udale izimbobo ezihlukahlukene ngezansi sokuprakthiza kuzo zonke izinto.
Idizayini yesimanje sokuzivivinya i-ergonomic ne-pistol-like. Imishini yenzelwe ngokuhlukile embala. Esikhundleni se- sokuprakthiza kunomshini wokucindezela. Umsebenzi womshini wesandla sokukhetha ngakwesokunene nangesandla sokungakwesokunxele nakho kufinyelela kalula. Uma okunamathiselwe kuye kwahlelwa ngengozi, ukuze kungasuswa kalula kusuka kokuqukethwe, khona-ke umsebenzi wokuguqula isiqondiso sokujikeleza inikeza umsebenzi omuhle kakhulu. I-drill ingasuswa kalula kwizinto. Nge-attachment efanele, izikuluzi zingabuye ziphenduke izinto, isibonelo. Futhi ngokujikeleza kwesandla sobunxele, izikulubo nazo zingakhululeka kalula. Uma ukhetha umshini ngalezi zenzo, ukwandisa amathuba okusebenzisa ngesikhathi esifanayo ngoba umshini ungasetshenziselwa imisebenzi ehluke kakhulu.
Imishini yokwakha imishini yanamuhla iyimpi engamelana nayo. Ngisho noma umshini ngengozi wehlela phansi, awuthathi umonakalo. Ukukusiza sokuprakthiza ukuphatha okuphelele, isibambo sitholakala ngemuva kwe-chuck drill. Lokhu kwenza kube lula ukulawula ukucindezelwa okusetshenziswe ngesikhathi sokugaya. Futhi ngezandla ezimbili umshini ungalawulwa futhi uqondiswe kangcono kakhulu.
Ngokuba izinto ezinenkani nezinamandla, ukusetshenziswa kwe-a sokuprakthiza nomthelela umsebenzi. Lo msebenzi ngokuvamile ungasetshenziswa nge-switch ehlukile. Futhi ngenxa yesenzo esheshayo-isenzo chuck, imishini ingashintshwa kalula futhi kalula. Ngesibambo esisodwa nje, ungakwazi ukukhipha uphinde uqhube imishini. Ngakho-ke, ukhiye we-chuck, owawudingekile ekusetshenzisweni kwe-drill chuck nge-ring toothed, ususwe ngaphandle kokushintshwa. Ukuguqulwa kwama-drill akukaze kube lula futhi kulula.
Ukwakha a sokuprakthiza
Die sokuprakthiza inomshini osebenzayo namanje. Ngaphezu kwalokho, umshini unebhokisi legiya kanye ne-drick chuck. Ezinye izingxenye ze- sokuprakthiza kukhona ama-brush kanye ne-carbon. Umqondo jikelele wemishini uzinzile futhi unamandla kakhulu, ngakho-ke nawo afaneleka kakhulu ukusebenza okuvamile futhi okunamandla kwisayithi yokwakha. Okusebenza kakhulu futhi ethandwayo yizikhwama ezingenasici. Ngalokhu amadivaysi awuncike ezinyathelo ezidingekayo zokungena kagesi endaweni. Futhi, ibhethri yebhethri ingaba lula ukusingatha ngokuqhathanisa ngqo nomshini oboshwe ngekhebula. Ngaphandle kwamandla okuphazamisa umshini umsebenzi ungenziwa ngokumane futhi ukulayishwa ngokuphelele. Imishini yokugaya imishini yangasese inamandla futhi ingasetshenziswa kuzo zonke izinto zokwakha. Ukuze uthole umsebenzi omningi, kunconywa ukuthi ube nebhethri eliphambene ilungele ukusetshenziswa. Abakhiqizi bekhwalithi abaziwayo banikeza uhla olunzulu lwezesekeli ngemishini yabo. Lokhu kusho ukuthi zonke izingxenye zingabuye zithengwa, uma lokhu kuyadingeka.
Kukhona izinhlobo eziningi zemishini etholakalayo kwezohwebo, ngakho-ke ubhekene nesipho esicebile. Umshini ofanelekile unikezwa zonke izinjongo ezikhethekile. Uma ufuna ukugoba izimbobo ezakhiweni ezithambile kakhulu, ungasebenzisa ukukhwabanisa ngesandla. Ngemizamo emincane futhi eqondile, ungakwazi ukugoba kalula izimbobo ngamathuluzi esandla. Ikakhulukazi uma ngabe izinto ezimbozwayo ziboshwe kahle kakhulu, lolu hlobo lomshini wokudoba lufanelekile. Nge-drill ngesandla, ungasetha ijubane ngokwakho ukuze indaba ivikelwe kangcono. Lezi zinsimbi ziphakanyiswa ikakhulukazi emkhakheni wezobuciko.
Kulula futhi kuphumelela kakhulu ukushayela ngomshini kagesi. Ama-motors anamandla kanye nezibani ezinhle kakhulu ziletha imiphumela ephelele. Ehlonywe ngamazinga ahlukene ejubane, lo mshini ungaphatha nemisebenzi ehlukene kakhulu kalula. Okuthandwa kakhulu yimishini eyenza ukulawula okusheshayo kwejubane. Futhi ngenxa yesiphathi sesibili ungasebenzisa ugesi sokuprakthiza Ukucindezela okuhle kakhulu ngezandla zombili. Lokhu kwenza wonke amabhasi aphephe futhi anokwethenjelwa. Ukushayela ngokukhonkolo kanzima noma ukugubha okulula kuyinto elula kakhulu ngomsebenzi wokubamba ngesando. I-drill iyangena kalula ngokusebenzisa le ndaba. Ngenxa yenani elikhulu lemithelela ekhanda lokugaya, ukugoba imbobo kuqondiswa kakhulu. Lapho kwakukhona umzamo omkhulu okwakudingeka ngomshini ovamile, umsebenzi manje usufana nobungane nabantwana. Ngokuyinhloko, ukusebenza komthelela okushintshayo kusetshenziselwa ukugaya ngamatshe noma kukhonkolo. Ukuze ukhonte ngezinkuni noma nasensimbi, akudingeki umsebenzi wokugubha. Kungaba lula ukuxoshwa ngokunamathisa i-lever.
Uma ufuna kuphela ukugqoka emayini futhi ufuna ukusebenzela emayini, kuhle ukuthenga ukushayela ngesando. Ngalo mshini ungakwazi ukubhoboza futhi futhi ugesi wesisel. Ngokuthuthukiswa kwamandla amakhulu ongasebenzisa a Hammer rotary yonke imisebenzi edingekayo yenziwa kahle kakhulu. Uma kuqhathaniswa ne-drill ye-percussion, noma kunjalo, isando sokugoba sinzima kunesisindo somshini. Ngalesi sizathu, isando sokujikeleza sinikeza ithuba lokufeza umsebenzi we-chisel nomshini. Ngisho nezinto ezibonakala zilukhuni kakhulu ukushayela ngezintambo ziphatha ngokushesha futhi kalula. Ngomzamo omncane uma kuqhathaniswa nezindlela ezivamile zokusebenza, uthola impumelelo enkulu.
Kufanele uqaphele lokhu uma uthenga umshini wokudoba
Kuye umsebenzi oyisebenzisayo no sokuprakthiza umshini omusha kufanele ulethe ukusebenza okudingekayo. Ngenxa yalesi sizathu, kufanele unake ukunakekelwa kwemishini lapho usebenzisa umshini. Ngomsebenzi woketshelwa ngamatshe nobuningi, kuphakanyiswa ukuba ukhethe ukushayela isando noma isando lokushayela. Uma umshini omusha kufanele usetshenziselwe izinkuni, khona-ke ungasebenzisa umsebenzi wokuthinta a sokuprakthiza bese ukhetha idivayisi ejwayelekile. Empeleni, imishini yokugoma ifinyelela kakhulu nokuqhathaniswa nokuqhathaniswa nokujwayelekile sokuprakthiza impilo emfushane. Lokhu kungenxa yemithwalo enkulu kakhulu umshini owenzayo nomsebenzi wethonya. Ngaphandle komthelela umsebenzi kungaba sokuprakthiza eminyakeni eminingi.
Uma ungathanda ukusebenza ozimele kunethiwekhi, i-accumulator inconywa. lokhu sokuzivivinya zivuselelwa esikhathini esifushane kakhulu futhi zinikeze ukusebenza kahle. Amabhethri e-Li-Ion ayaphinda alayishwe noma nini. Ngaphandle kwekhebula lombuso ophazamisayo ungasebenzisa nalo mshini ngokuguquguqukayo. Futhi uma umsebenzi omkhulu futhi owandayo kufanele wenziwe, ke lokhu kungenzeka kalula ngebhethri efanelekile. Abakhiqizi abaningi banezinto ezikhethekile zokufinyelela, ukuze amabhethri athathe indawo angathengwa kalula.
Umgomo wokuthenga ubuye nesisindo somshini. izinga sokuzivivinya kanye nokuguqulwa kwamandla omuhle kunesisindo esiphakathi kwamakhilogremu amabili nantathu. Uma unesisindo esiningi kakhulu, uzothola nemishini elula efanelana nemingcele yokusebenza yemishini ephezulu. Uma ukhethe umshini, kufanele uqaphele izesekeli. Ama-dricks engeziwe noma okunamathiselwe kufanele atholakale kuwo wonke umsebenzi ofanelekile. Futhi uma unqume ukuthenga ibhethri, kufanele uqiniseke ukuthi amabhethri athatha indawo ayatholakala kumkhiqizi. Kunconywa ukuthenga izesekeli zokuqala zomshini.
Izindlela ezehlukene zitholakala ku-entsha yakho sokuprakthiza ukuthenga. Ngakolunye uhlangothi kukhona ababonisi bezobuchwepheshe onawo ongazihlinzeka ngolwazi oluningiliziwe ngezinzuzo nezinkinga zamamodeli ahlukahlukene asemshini. Ukukhetha okuhle kwemishini kungatholakala ezitolo ze-hardware. Uma uthenga esitolo kufanele ngaso sonke isikhathi wenze ukufaniswa kwentengo. Lapha ungathola umehluko omkhulu wamanani, ongayisebenzisa wena.
Uma usuvele unqume kumodeli othile womshini, i-intanethi ikunikeza ithuba elihle kakhulu lokusebenzisa intengo engcono yokulondoloza imali. Ukukhethwa kwemishini kukhulu kakhulu kuyi-intanethi. Njengoba kulula kakhulu ukusebenzisa isipho esihle kakhulu. Abahlinzeki abaningi be-intanethi manje bakhipha ngaphandle kwezindleko zokuthumela ezengeziwe. Lokhu kwenza izipesheli zikhangise kakhulu. Yingakho ungasebenzisa inzuzo yamanani kuwe. Uma uyala umshini wakho oyifunayo ku-intanethi, uzonikezwa ezinsukwini ezimbalwa ukuya emnyango wangaphambili. Imali engaphezulu nesikhathi ongeke ukwazi ukulondoloza.
Abakhiqizi bomshini abanconywe
sokuzivivinya inikezwa ngabakhiqizi abahlukene. Abakhiqizi abanikeza imishini eliphezulu kakhulu ngokwesibonelo: Makita, Bosch, noma Metabo. UMakita uyaziwa kahle ngokushayela phansi. Imishini inamandla kakhulu, ngakho wonke umsebenzi ungenziwa ngokushesha futhi ngokuphumelelayo.
Die sokuzivivinya kusuka ku-Bosch zitholakala ezinhlobonhlobo eziningi. UBoch unikeza imishini ehlukahlukene. Lokhu kwenza kube lula ukuthola umshini ofanelekile we-Bosch yonke imisebenzi. Imishini inekhwalithi ephakeme futhi inomsebenzi wesikhathi eside.
I-Metabo iyaziwa ngemithonya yayo ephawulekayo. Ngalawa madivaysi ungenza konke okusebenzayo ngokuzungezile kalula futhi ngaphandle kokuzibandakanya. Okwamanje, amamodeli amaningi omshini atholakalayo njengenguqulo yebhethri. Lokhu kukuvumela ukuba usebenze ngokuvumelana nezimo ngomshini weMetabo.
Abakhiqizi abashiwo ngenhla bemishini yokugaya bayanikeza nobuningi bezesekeli. Ngenxa yalokho, kungenzeka njalo ukuthenga izingxenye ezengeziwe noma izingxenye zokuphumula zomshini.
Isihloko sangaphambiliniinja Crate
Isihloko esilandelayoukukhululwa Inani